About Us - Guangzhou Aiweidy Izibane Acoustics Co., Ltd
Arc-isibane Ukuhambisa Head
LED Head Ukuhambisa
Ushukumise intloko LIGHT
G uangzhou Aiweidy Izibane Acoustics Equipment Co., Ltd, Siya omnye iimveliso ngobuchule nokuthengisa namashishini yeSigaba ukukhanyisa. Inkampani yethu yasekwa ngo-1992, kwaye ngoku amava kwiminyaka eli-18.
Inkampani Unezixhobo kuphela imveliso phambili, kodwa kukho inani ezikumgangatho ophezulu, iteknoloji ophezulu, iinjineli zobungcali kunye nokuphuculwa kwabasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobugcisa, kukho inani elikhulu sabakhutheleyo, ubumbano abasebenzi kakhulu. Inkampani igama kuba kumgca, izimvo zobuchwepheshe obutsha, kwaye rhoqo ukwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu aphucula engundoqo ukhuphiswano kwamashishini. Ngo-2003 inkampani wegqitha 09001: 2000 kwezatifiketi umgangatho kumazwe ngamazwe, kwaye wafumana "CE", "CCC" isiqinisekiso.
Igama Aiweidys 'lokuqala, umgangatho kuqala, izinto ezintsha okokuqala, inkonzo kuqala "ndlela, umoya abantu -oriented, izinto ezintsha zeteknoloji kunye nophuhliso oluzinzileyo" intanda ishishini, njengesiqhelo, ukubonelela abaxumi bethu umgangatho eliphezulu iimveliso kunye neenkonzo amazwe isebenzayo abaxhasi sibuyele kuthi inkxaso kunye nothando.
G uangzhong Aiweidy Izibane Acoustics Equipment Co, Ltd, i uphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo kwezibane professional kunye nesandi kwibala kwamashishini abaxhakaxhaka Company ibekwe Baiyun District of Guangzhou City, nesigubungelo 15 Acra, ukwakha indawo ka 25000 m ^ 2. Izityalo Garden, umthombo zokuhomba ngaphakathi echibini. 700 m ^ 2 mveliso kunye ezikrelekrele studio nemiba ngemiba yezemfundo, ngaphezu kwama 1,000 square metres indawo ofisi zale mihla. Emva kweminyaka engama-20 uphuhliso, inkampani iye yaba yinto imizi emikhulu kakhulu amashishini isikali Product kwilizwe zithunyelwe kulo lonke ihlabathi, kunye nabathengi basekhaya kunye angaphandle ngokufanayo.
Guangzhou Aiweidy Ukukhanyisa Acoustics Equipment Co., Ltd, Siya omnye iimveliso ngobuchule nokuthengisa namashishini yeSigaba ukukhanyisa. Inkampani yethu yasekwa ngo-1992, kwaye ngoku amava kwiminyaka eli-18. Siye amukela inkqubo yolawulo kwinethiwekhi ikhompyutha, kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho ngokuhambelana ngqongqo ISO9001: Iimfuno 2000 wemveliso. Iimveliso zethu ziye aqinisekisiwe with "CCC" kunye "CE," yaye "RoHs".
Iimveliso Aiweidy sinandipha waziwa kakuhle kwimarike yamazwe ngamazwe, ingakumbi izibane intloko ihambe, izibane zethu LED kunye nezibane nangaphandle. Ngoku, iimveliso zethu lithunyelwa eYurophu, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, North nakuMzantsi Melika kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Xa phambili, bonke oogxa ka Aiweidy ndikuncedile intsingiselo yawo ekumgangatho kuqala, inkonzo kuqala, izinto ezintsha kuqala kunye nokuthembeka kuqala njengesiqhelo ukuze bakhonze abathengi kunye nabahlobo ukusuka apha ekhaya nakumazwe aphesheya.
Idilesi: . 2 / F, No. 3, South Xinghe 5th Road, Area Industrial 1st, Taihe, Baiyun sasaz, Guangzhou, Guangdong, China (wase-)